Naya Post Nepal | शिक्षकले यी युवतीलाई कलेजमै यस्तो गरेको भिडियो देखाए, (हेर्नुहोस भिडियो)
शिक्षकले यी युवतीलाई कलेजमै यस्तो गरेको भिडियो देखाए, (हेर्नुहोस भिडियो)
एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थीलाई यौ”न दुव्र्”यहार गरियो भन्ने स माचार अचेल दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। यो समाचार रहेको जनक नमूना मा वि , नवलपुर को जहा आफ्नै शिक्षकले कले जमै से”क्स भि’डियो देखाएका छन्।
नदेखाउनु मैले यस्तो कहिले पनि हेरेको छैन भन्दा तलाई इ”मो सन आई सक्यो? पा* आई सक्यो भन्दै नराम्रो क्रिया”कलाप गरेको पी”डित”ले सुनाएकी छिन्।
यस्ता कि’सिमका घ””टना दिन प्रतिदिन बढिरहँदा आफ्ना छो रा कसरी स्कूल पढाउनु ,उनी हरुनका’हा चाई सुर”क्षित छन्?? प्रश्न उ’ठिरहेको छ।
यो पनि ,,यो पनि ,,आँचल शर्मा एक नेपाली अ’भिनेत्री र मो डल हुन् । उनले आफ्नो अ’भिनय यात्राको आरम्भ नेपाली च लचित्र नाई नभन्नु ल ४बाट गरेकी हुन्। पहिलो चलचित्रको स’ फलता पछि उनले शत्रु गते र जोनी जेन्टलम्यान नामक चलचि त्रमा समेत भू’मिका गरिन्
नेपाली चल’चित्र उद्योगमा प्र’वेश गर्नु अगावै उनी एक सौन्दर्य प्र’तियोगिता जि”तेकी थिइन् । आँचल शर्मा नेपाली सिनेनाग रिकओ लागि कुनै नौलो नाम हैन । आँचल पछील्लो समय चर्चा संगै बि’वाद’मा पनि ता”निएकी हुन्छिन् । आँचल अहिले फिल्म संगै म्युजिक भिडियोमा पनि ब्य’स्त रहन थालेकि छिन् ।
उनी भन्छिन् “मलाई म्युजिक भिडियोले धेरै कुरा सिकायो । यस्तै अहिले क र णीको अभियोग लागेका अभिनेता पल शा हको बिषयले नेपाली समाज ता”तिएको छ । नायक पल शाह क’रणी प्र’काण’मा नाबालिगपछि उनका बुवाले पनि ब”यान फेरे’का छन् ।
मंगलबार जिल्ला अदालत तनहुँमा पी’डित भनिएकी बा’लिका का वुबाले ब’यान फे’र्दै कर णी नभएको ब’ताएका छन् । उनले उजुरीमा कर णी भने पनि अदा’लतमा बयान दिने क्रममा कर णी नभएको बताएका छन् ।
‘बयान पूरै फेरिएको होइन। उ’जुरी मैले नै दिएको हो, हस्ताक्षर प’नि मेरै हो भन्ने भो । कर णीको व्यहोराको जाहेरी दिए पनि पल शाहले कर णी गरेको रहेनछ भन्ने ब’यान दिनुभयो’, जि ल्ला न्याधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले बताए ।
२०७९ बैशाख ८, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 981 Views